मिनी इंडोनेशिया, Taman मिनी इंडोनेशिया Indah - जावा
ठेगाना: जकार्ता टाइमर, डीकेआई जकार्ता, इन्डोनेशिया
टेलिफोन: +62 21 877 92078
पूर्वी जकार्तामा त्यहाँ एक अनोखी स्थान हो, जसले इतिहासकार र संस्कृतज्ञहरूको पछाडिको कामको परिणाम हो। यो "मिनी इंडोनेशिया" नामक एक मनोरञ्जन र सांस्कृतिक क्षेत्र हो। यस पार्कमा तपाईंले इन्डोनेशियाको बारेमा लगभग सबै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ, तपाईं सम्पूर्ण देशमा सानो मा देख्नुहुनेछ।
इन्डोनेशिया - एक विशाल देश धेरै द्वीप , प्रांतहरु र राष्ट्रिय पार्कहरू , र राष्ट्रीयताहरू, विभिन्न संस्कृतिका र जातीय समूहहरूको संख्यामा यो बस, बस अद्भुत छ। यहां सम्म कि सर्वाधिक अन्वेषक यात्री देश को हरेक टापु मा नहीं जा सकते, जो न त अधिक 17 80 भन्दा कम छ। मिनी इंडोनेशिया पार्क इज्जत र सबै भन्दा रहस्यमय स्थानहरु र इंडोनेशिया को क्षेत्रहरु को देखने को लागि एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्दछ। अनि दिन 15 संग्रहालयहरू,7चर्चहरू , 11 पार्कहरू र धेरै थिएटरहरू भ्रमण गर्न पर्याप्त छैन, किनभने "मिनी इन्डोनेशिया" एक वास्तविक रिसोर्ट हो , जुन तपाईं धेरै दिनसम्म भेट्न सक्नुहुन्छ, त्यसोभए तपाईं सबै कुरा हेर्न र फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
"इन्डोनेसियामा सानो इन्डोनेशिया" को निर्माणको लागि एक महत्त्वपूर्ण विचार इन्डोनेशिया सिटी सिटी हार्टिनाचको पहिलो महिला संग उत्पन्न भयो। राष्ट्रपति सुकारोना को पत्नी को दुनिया को दिखाना चाहते हो कि उनको देश को विविधता र धनी किसान हो। 1972 मा एक परियोजना विकसित भएको थियो, जसको मुख्य विचार इन्डोनेसियाली जनताको राष्ट्रिय संस्कृति खेती गर्न थालेको थियो। मिनी-इन्डोनेशिया पार्कको भव्य उद्घाटन 20 अप्रिल 1975 मा भएको थियो, र आज यो जकार्ताको मानव निर्मित आकर्षणको सबैभन्दा आकर्षक र रोचक स्थान हो।
पार्क "मिनी इन्डोनेशिया" पर्यटकहरूको विशेष ध्यानको योग्य छ, यसको क्षेत्रमा एकत्र गरिएको यो वास्तुकला कृति। तपाईंको संस्कृतिको सार्थक रवैया सचमुच पार्कको प्रत्येक सेन्टिमिटरमा देखाइएको छ, यो सम्पूर्ण क्षेत्र राम्रो हेरविचार र सफाईमा राखिएको छ, किनभने भ्रमणले तपाईंलाई अपरिहार्य खुशी ल्याउनेछ। तपाईं निम्न यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ:
इंडोनेशिया प्रांतहरु अलग अलग छवियों को रूप मा प्रस्तुत गरिन्छ। यी हरेक राष्ट्रत्वको 27 वटा नमूनाहरू छन्, पूर्ण आकारमा बनाइएका र उत्कृष्ट नक्काशी र उनीहरूका जनआन्दोलनहरूका साथ सजाय हुन्छन्। यस प्रकार, तपाईं जावा , कलमंतन , बाली , सुमात्रा , पापुआ र धेरै अन्यका बासिन्दाहरूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। विस्तार भित्र परम्परागत गृह, फर्नीचर, कला वस्तुहरू र राष्ट्रिय परिधानहरू समावेश छन्। तपाईं जावजा शासकहरूको सजावट र Papuans को गरिब हड्ताल कसरी देख्न सक्नुहुन्छ। प्रायजसो पर्वतहरूमा त्यहाँ गाइडहरू छन् जुन प्रान्तको इतिहास र प्रथाहरूको बारेमा बताउँछन्। इन्डोनेशियामा, 33 प्रांतहरू छन्, किनभने पार्क बिस्तारै विस्तार हुँदैछ, र उत्तरपश्चिममा नयाँ भेलाहरू निर्माण गरिन्छन्।
संग्रहालय "मिनी इन्डोनेशिया" पहिलो सेकेण्डबाट टाढा छ। यिनीहरु मध्ये सबैभन्दा ठूलो भक्ति पटिविटी राष्ट्रपति सुकरो वर्षहरु र इन्डोनेशिया संग्रहालय को एक विशाल जनगणना को विस्तार को लागि दान को कला को अद्भुत संग्रह संग छ। यसको अतिरिक्त, स्ट्याम्पहरू, कोमोडो चिहानहरू, कीराहरू, पूर्वी तिमोर, र अरूको एक संग्रहालय हो।
प्राकृतिक पार्कहरूले "मिनी इन्डोनेशिया" मा सम्मान को स्थान राख्छन्। तिनीहरूका सबै भन्दा रोचक अर्कैड, क्याप्टिई, चराहरू पार्क छन्। त्यहाँ यहाँ फार्मेसी पार्क छ।
पोखरा पार्क को केन्द्र संग सजाया गएको छ। यदि तपाइँ यसलाई केबल कारको उचाईबाट हेर्नुभयो भने, तपाईं सबै टापुहरू र केही आइपुगेको इंडोनेशियाको विस्तृत कम नक्शा देख्न सक्नुहुनेछ।
मन्दिर र थिएटरहरू। साथै "मिनि-इन्डोनेशिया" को क्षेत्रमा थियेटरहरू, आईएमएक्स चलचित्रहरू, देशको धार्मिक भवनहरूको सानो प्रतिपूर्तिहरू जस्तै कि पौराणिक Borobudur , Prambanan , बाली मंदिरहरू छन्।
बच्चाहरु को लागि अद्भुत मनोरंजन पार्क, मिनी डिज्नील्याण्ड, एक पानी पार्क, एक शिल्प केन्द्र, बच्चाहरु को महल।
पार्क अक्सर उत्सवहरू, प्रदर्शनहरू, कन्सर्टहरू होस्ट गर्छन्। क्षेत्र मा वहाँ भोजनालय र कैफे एक विस्तृत विविधता संग खाना, धेरै स्मारिका को दोकान र2हस्टल।
मिनी इंडोनेशिया पार्क 7:00 देखि 21 बजे सम्म खुला छ। प्रवेश शुल्क $ 0.75 हो, धेरै पाइलाहरू नि: शुल्क छन्, तर शुल्क थियेटर र संग्रहालयहरू हेर्नको लागि अलग छ।
पार्क को क्षेत्र 150 हेक्टेयर मा रह्छ, यसैले प्रति दिन पुरा क्षेत्र मा हिड्न धेरै मुश्किल छ। दर्शकहरूको सुविधाको लागि, भ्रमणका विभिन्न तरिकाहरू यहाँ व्यवस्थित छन्:
साइकल भाडा प्रति घन्टा $ 0.75- $ 0.90। तपाईं एकल साइकलहरू, डबल, ट्रिपल र यहाँ साइकल पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ;
म्युजिक भिडियोको लागि एक टिकट $ 3, यो प्रकारको ट्रांसपोर्ट पुरा क्षेत्र हेर्नको लागी उचाइभन्दा धेरै सुविधाजनक छ;
तपाईं पनि कार भाडामा पार्न सक्नुहुन्छ, पार्कमा ट्राफिक लाइटहरू र सडक चिन्हहरू छन्।
मिनी इंडोनेशिया पार्क जकार्ता को दक्षिण-पूर्व मा स्थित छ , यसको केन्द्र देखि 18 किमी। तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
एक टैक्सी $ 7.49को लागत;
बस नम्बर7बस स्टेशनमा रम्बूतन, स्टेशनमा मिनिबस T15 मा परिवर्तन, कुलमा यो तपाइँले $ 0.22 खर्च गर्नुहुनेछ।
"जीवित केन" Rodrigo Alves सञ्चालनका परिणामहरु को बारे मा कुरा गरे र फोटो "परिवर्तन"
बच्चाहरु मा रोवरवायरस संक्रमण - उपचार
हलवेमा जूता रैक
सेलरमा कन्डसेनेट - कसरी छुटकारा पाउनु हुन्छ?
रोमिंग संग छत स्कर्ट बोर्ड
टेबल संग तल्ला लैंप
ओभरहेड स्पॉट लाइट फिक्स्चर
नि: शुल्क शैली कपडा
बच्चाहरु मा बुखार
हिप संयुक्तको एक्स रे
पाक कला ओक
पर्देका लागि भिडियोहरू
पुरानो चोलीकास्टाइटिसको लक्षण - लक्षण
लस एंजिल्समा "वयस्क" कार्टूनको प्रेमीयरमा महिमामा सल्म हेकेले फ्रिज गरे
बच्चाहरूले पालोलाई औद्योगिक ग्लुको साथ डुबेर र सडकमा मर्नुपर्थ्यो!
कसरी छतको स्तर बढाउनु हुन्छ?
जीन्स वारेन्की - के यसको अर्थ के हो, के गर्ने र कसरी फैशनेबल छवियों को निर्माण गर्न को लागी?